Kani waa iPadOS Multitasking cusub | Wararka IPhone
iPadOS wuxuu u jeedaa isbeddel muhiim ah iPad-ka, kaasoo ugu dambeyn kala soocaya nidaamkiisa hawlgalka isagoo ka soocaya macruufka, kaasoo u harsan iPhone iyo iPod Touch. Midka aan loogu yeerin iOS 13 taa badalkeedana Apple wuxuu go aansaday in loogu yeero iPadOS kaliya maahan damac, iyo hawlo badan oo badan oo aan ku haysanno iPads is waafajinaya ayaa caddeyn u ah tan.
Isbedelada muhiimka ah ee Iskuday, Muuqaalka Kala-baxa, sida codsiyada loo maareeyo, desktops kala duwan oo leh shaashado kala qaybsan, canaasiirta aad ka qaadan karto daaqad kale ilaa… waxaa jira isbadalo badan waxaana dooneynaa inaan ku tusno fiidiyowgaan.
Tani maaha isbeddel muuqda oo xagjir ah oo ka yimid wixii aan ku haysannay noocyadii hore. Hawlaha wali waxaa loogu yeeraa isku mid: Slide over daaqadaas sabaynaysa oo aan la jaanqaadi karno midigta ama bidix shaashadda: Split View markaan u kala qaadno shaashadda labo isla markaana aan si isku mid ah u eegno laba barnaamij Laakiin howlahaas gudahood isbeddellada ayaa aad u ballaaran. Hadda waxaan ku soo ururin karnaa barnaamijyada 'Split View', si deg deg ah ugu kala beddelanaa iyaga, oo aan aragnaa dhammaan kuwa aan furan nahay
Hadda waxaan furi karnaa laba daaqadood oo codsi kasta oo la jaanqaadi kara ah oo aan ku daawan karnaa 'Split View', oo markaan rabno inaan aragno dhammaan daaqadaha furan ee isla cod-bixinta ayaan riixi karnaa oo qaban karnaa astaanteeda, sida Exposé-ka ay adeegsadayaasha Mac u barteen. Ka gudbida walxaha inta u dhexeysa daaqadaha waa sahlan tahay, Nidaamku xitaa wuxuu ogaan doonaa waxa ku jira wixii aan soo xulnay haddii aan dhanka u jiidanana wuxuu furi doonaa dalab u dhigma (Safari hadday xiriir tahay, Mail haddii ay tahay cinwaan emayl, iwm). Xitaa waxaan furi karnaa daaqad anagoo ka soo jiidaneyno ogeysiis. Waxaad ku arki kartaa intaas oo dhan iyo in ka badan fiidiyaha maqaalka, oo ka faa'iideyso iPad-kaaga hadda maadaama uu ka wax soo saar badan yahay sidii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Kani waa iPadOS Multitasking cusub
Waad salaaman tihiin, sidee u maamushaan jadwalka si tirooyinku u soo baxaan ???
Aniga tayda waxba kuma soo baxaan oo kaliya waxay dhahaan dhacdooyin ma jiraan
Ku jawaab Ethan
Waxay ku jirtaa barnaamijka Fantastical
Apple waxay qorsheyneysaa inay u wareejiso wax soo saarka AirPods Vietnam
Kala Qaybso Muuqaal iyo Isbaddal Hadda Laga Heli Karo Spotify-ka iPad-ka